तिजकै दिन नायिका सम्राज्ञी तेस्रो लिंगीसंग के गर्दैछिन ? शिल्फी खिच्नेको तछाडमछाड (हेर्नुस भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/तिजकै दिन नायिका सम्राज्ञी तेस्रो लिंगीसंग के गर्दैछिन ? शिल्फी खिच्नेको तछाडमछाड (हेर्नुस भिडियो)
तिजकै दिन नायिका सम्राज्ञी तेस्रो लिंगीसंग के गर्दैछिन ? शिल्फी खिच्नेको तछाडमछाड (हेर्नुस भिडियो)
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको नवल नेपाल निर्देशित पारिवारिक प्रेमकथामा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म ‘मारुनी’ ले हलमा दर्शकको खासै राम्रो साथ पाउन सकेको छैन । एकसाथ प्रदर्शनमा आएको साउथ सुपरस्टार प्रभास अभिनीत फिल्म ‘साहो’ ले यो फिल्मको व्यापारमा ठूलो असर गरेको छ ।
यद्यपि, फिल्मको ‘वर्ड अफ माउथ’ बलियो छ । समीक्षक र दर्शक दुबैले फिल्मको तारिफ गरेका छन् । पुरूष भएर जन्मिएकी तर लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनेकी एक ‘ट्रान्सजेन्डर’ पात्रको प्रेमकथा वाचन गर्ने यो फिल्म सेलिब्रेटीलाई पनि निकै मन परेको छ ।
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह चलचित्रको मेरुदण्ड हुन् । उनले, पहिलो पटक आफूलाई फरक भूमिकामा ढालेकी छिन् । उनको काम गज्जबको छ । निर्माणपक्षले यो चलचित्रका लागि उनलाई १५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको थियो ।
साम्राज्ञी आफैले पनि पहिलो पटक आफूलाई यति राम्रो प्रतिक्रिया आएको बताइसकेकी छिन् । साम्राज्ञीले सिंगो चलचित्र नै धानेकी छिन् । उनको प्रवेशसँगै चलचित्रको कथावस्तु मोडिएको छ ।
यसै चलचित्रको प्रमोसनका लागि साम्राज्ञी तेस्रो लिंगीको तिज कार्यक्रममा पुगेकी छिन । साम्राज्ञीलाई तेस्रोलिंगीको उक्त कार्यक्रममा भब्य स्वागत गरेको थियो । आफ्नो जीवन कथामा आधारित चलचित्र निर्माण गरेको कारण उनलाई उक्त कार्यक्रममा तस्रो लिंगीहरुले भब्य स्वागत गरेका हुन् ।
बाकी भिडियोमा हेर्नुस :
३ वर्ष देखी कतारको जेलमा श्रीमान, श्रीमतीको आँखामा आँशु नभएको दिन छैन, धरौटी रकम ३५ लाख भनेको बेला ३५ रुपैया छैन
भ्रष्टाचार र बेइमानी गर्न राजनीतिमा आएको हैन : गोकुल बास्कोटा
उपत्यकामा फेरि एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय, यस पटक भने यी क्षेत्र खुल्ने भयो
नेपालमा तीव्र फैलिँदै संक्रमण, स्थिति भयावह बन्दै